Buy 1:12 4WD လမ်းဘေးကုန်တင်ကားများအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Version 2.4G ရေဒီယိုထိန်းချုပ် RC ကားကစားစရာများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
1: 12 4WD ဟာ Off-လမ်းမကြီးကုန်ကားနောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဗားရှင်း 2.4G ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ရေး RC ကားများကစားစရာ
$75.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $151.99
အရောင် အနီရောင်အကြီးစား 37cm 27cm ဖြူသတ္တု 28cm အနီရောင် 28cm အပြာ အကြီးစားအစိမ်းရောင် 37cm 37cm က Black အကြီးစား အကြီးစား 37cm ဖြူ 27cm က Black သတ္တု 27cm က Black2ဘက်ထရီ 27cm အဖြူ2ဘက်ထရီ 37cm အနက်ရောင်2ဘက်ထရီ 37cm အနီရောင်2ဘက်ထရီ 37cm အစိမ်းရောင်2ဘက်ထရီ
တရုတ် / 37cm အနီရောင်အကြီးစား တရုတ် / 27cm အဖြူရောင်သတ္တု တရုတ် / ၂၈ စင်တီမီတာအနီ တရုတ် / 28cm အပြာ တရုတ် / 37cm အစိမ်းရောင်အကြီးစား တရုတ် / 37cm အနက်ရောင်အကြီးစား တရုတ် / 37cm အဖြူရောင်အကြီးစား တရုတ် / 27 စင်တီမီတာအနက်ရောင်သတ္တု တရုတ် / ၂၇ စင်တီမီတာအနက်ရောင် ၂ ဘက်ထရီ China / 27cm အဖြူ ၂ ဘက်ထရီ တရုတ် / ၃၇ စင်တီမီတာအနက်ရောင် ၂ ဘက်ထရီ တရုတ် / ၃၇ စင်တီမီတာအနီ ၂ ဘက်ထရီ တရုတ် / ၃၇ စင်တီမီတာအစိမ်းရောင် ၂ ဘက်ထရီ
1:12 4WD လမ်းဘေးကုန်တင်ကားများအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Version 2.4G ရေဒီယိုထိန်းချုပ် RC ကားကစားစရာများ - China / 37cm Red Large backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ကို ABS, ရာဘာစေး, သတ္တု, resins, ပလပ်စတစ်
controller Mode ကို: MODE1, MODE2
အသက်အရွယ် Range: > ၆ နှစ်၊ လူကြီးများ၊ ၁၂-၁၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်၊ > ၈ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၈ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်
package ပါဝင်သည်: remote control, ဘက်ထရီ, Operating ညွှန်ကြားချက်များ, ကို USB Cable ကို
ရှုထောင့်: 35 * 20 * 18cm
စကေး: 1: 12
ဝေးလံခေါင်သီအဝေးသင်: 30-50 မီတာအကြောင်း
တုရုမြို့ Track: 10-20cm
လေယာဉ်အချိန်: 30 မိနစ်
Power: B ကိုattery
အင်္ဂါရပ်များ: ခုခံတွန်းလှန်, မော်ဒယ်, ပေါက် Shock, Diecast
remote control ဘက်ထရီ:2* AA ကိုဘက်ထရီ (မပါဝင်ပါဘူး)
RC ကားတစ်စီး: လျှပ်စစ် RC Car ကိုရေဒီယိုထိန်းချုပ်, Truck ကား
စတီယာရင် servo: 2.4GHz RC မော်တော်ကား
1: 12 Truck ကားအရွယ်အစား: 37 x ကို 23 x ကို 20cm
30 မိနစ်: အချိန်ကစားခြင်း
3 နာရီ: အချိန်အားသွင်း
နောက်ဆုံးပေါ် 1: 16 / 1: 12 Full-စကေး R ကို A / C နဂါးထရပ်ကား။
2.4GHz ရေဒီယိုနည်းပညာ, ကျယ်ပြန့်ထိန်းချုပ်မှု 50M အထိအထိ။
ရပ်ဆိုင်းမှု shockproof စနစ်ကပိုကောင်းထရပ်ကားကိုကာကွယ်ပေးသည်။
မင်္ဂလာပါ-မေးရော်ဘာဘီးနှင့်အတူ, Anti-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်, စုံလင်သောအတှေ့အကွုံ။
သက်ဆိုင်လယ်ကွင်း: မြေပြင်, မြက်ပင်သို့မဟုတ်သဲတပွညျ
1 x ကို RC မော်တော်ကား
1 x ကို transmitter
llego perfecto !!!5Estrella! con2baterias မသန်စွမ်း jugat mucho tiempo!
Tal cual Descripción, buena comunicación con vendedor ။
ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။ l'autonomie est bien celle annoncée။ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်
ဂရိတ်။ အရည်အသွေးကောင်း။ အနည်းငယ်နှေးကွေး။ သို့သော်အလွန်အမင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Excellent ကစတိုးဆိုင်
Большоеспасибозатовар။ ЗаВаштруд, заоперативноеотправлениезаказа။ Товарсоответствуетописанию။ Продавецактивен။ Спасибопродавцу။